१० हजार नेपालीसँग ४० अर्बको नक्कली सिक्का ! - Everest Dainik - News from Nepal
१० हजार नेपालीसँग ४० अर्बको नक्कली सिक्का !
-भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन सेनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई लिएर आरबिआईले असहज महसुस गरिरहेको बताएका थिए । आरबिआईले पटकपटक क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराइरहेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट